Nepali Rajneeti | ‘दाग लुकाउँदा अपराधीले जित्छ भनेर अघि बढें’ – एसिड आक्रमण
‘दाग लुकाउँदा अपराधीले जित्छ भनेर अघि बढें’ – एसिड आक्रमण
बैसाख १५, २०७८ बुधबार २७५ पटक हेरिएको
बरु मुस्कान आफू मात्र नभई आफूजस्तै पीडा भोगिरहेका अन्य पीडितहरूको पनि सशक्त आवाज बनेर निस्किन्। अपराधीमाथि कडा सजायको व्यवस्था गर्न आवाज उठाइन् र सफल पनि भइन्।
उनै मुस्कान साहसिक कदम र आत्मबलका कारण यो वर्षको ‘नागरिक नायक’ बन्न सफल भएकी छन्। मुस्कानसँग नागरिक नायक घोषणा कार्यक्रममा नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले गरेको अन्तरक्रियाको सम्पादित अंश:
म एसिडको आक्रमणमा पर्दा एसिडको जलनले छटपटिइरहेकी थिएँ। अस्पतालको बेडमा पुग्दा म आफ्नो अनुहार पनि हेर्न सकिरहेकी थिइन्। तीन/चार महिनापछि मात्र मैले आफ्नो अनुहार हेर्न सकें र जलन र पीडासँगै अत्यन्तै दुःखसमेत लागेको थियो।
त्यो पीडा म यहाँ भन्न पनि सक्दिनँ। मलाई एउटा कुराले निकै सताइरहेको थियो। अपराधीले एसिड आक्रमण गरेर यति ठूलो दाग (अनुहारमा) बनायो। यो दाग लुकाएर हिँडे भने त्यो अपराधीको जित हुन्छ भन्ने लाग्यो।
तर मलाई अपराधीलाई जोगाउनु थिएन। आफूले जितेर देखाउनु थियो। किनभने मेरो के गल्ती थियो र मैले समाजमा अनुहार लुकाएर हिड्नु ? यो प्रश्न मेरो मनमा उठ्यो। म कहिले पनि लुकेर बस्दिन। त्यो अपराधीको सपना म कहिले पनि पूरा हुन दिँदैन भनेर अघि बढेकी हुँ।
तपाईंमाथि जुन प्रकारको घटना भयो त्यसबाट धेरै अघि आइसक्नुभएको छ। २०७६ भदौ २० गते बिहान ६ बजे स्कुल जाने बेलामा तपाईंमाथि एसिड आक्रमण भएको थियो। अहिले पनि त्यो क्षण सम्झनुहुन्छ कि त्यो बिर्सन चाहनुहुन्छ ?
त्यो पीडालाई म सम्झन चाहन्नँ। किनभने त्यो दिन मेरो लागि कालो दिन थियो। म स्कुल जाँदा तेजाब आक्रमण भएको थियो। त्यतिबेला म आफैलाई थाहा थिएन कि म माथि एसिड आक्रमण भएको थियो भनेर।
म अस्पतालको बेडमा पुगेपछि मात्रै एसिड आक्रमण भएको थाहा भयो। तर अहिले म त्यो घटनालाई बिर्सेर अघि बढ्न चाहन्छु। अहिले मभित्र आत्मबल र विश्वास आएको छ। यो विश्वास सबैको साथ सहयोग र हौसलाका कारण आएको हो। जसले गर्दा म यहाँसम्म आएकी छु।
तपाइँ आफूले भोगेको समस्याबाट अघि बढेर साहसिक काम गर्नुभयो। यसको मूल्यांकन गर्दै यो वर्ष अमेरिकाले प्रदान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक महिला पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभयो।
कोरोना संक्रमण नभएको भए अमेरिकी प्रथम महिलाबाट उक्त पुरस्कार ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो होला। तपाईंले उहाँहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट कुरा गर्नुभयो। त्यतिबेला कस्तो महसुस भएको थियो ?
त्यतिबेला मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको थियो। मेरा लागि त्यो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो खुसी थियो। त्यो खुसी यहाँहरूकै हौसला र सहयोगका कारण सम्भव भएको हो। त्यो सम्मान मैले मात्र होइन सिंगो नेपालले पाएको हो।
यो एकजना चेलीले मात्रै होइन, हरेक चेलीले पाएको हो। यो सम्मानले मेरो आत्मबल र विश्वास थप बढेको छ। मैले अझै धेरै काम गर्नेछु। मेरो अझै धेरै सपना थपिएको छ। यो घटना नभएको भएदेखि तपाईं ११ कक्षामा पढ्दै गरेको हुन्थ्यो होला, यसै कारणले गर्दा तपाईंको दुई वर्ष ‘लस्ट’ भयो। छुटेको पढाइलाई अहिले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिले नै आफ्नो सुरक्षाका लागि कुनै न कुनै तालिम लिएको भए सायद मैले आफूलाई बचाउन सक्थेहोला। म एसिड आक्रमणमा परेपछि यो कुरा महसुस भयो। किनभने हामी आफैलाई थाहा हुँदैन कहाँ जाँदा के कस्ता कुराको सिकार हुनुपर्छ भनेर। अब मलाई मात्र होइन हरेक छोरीहरूलाई यस किसिमका तालिम दिन आवश्यक छ।
सहर होस् वा गाउँघर हरेक बाबा आमाले छोरालाई बलियो बनाउनका लागि विभिन्न तालिमहरू दिने गर्नुहुन्छ। तर मेरो अनुरोध छ, अब छोरोलाई मात्र होइन छोरीलाई पनि त्यस किसिमका तालिमहरू दिनुहोस्। जसले गर्दा छोरीहरू पनि निर्धक्कसँग हिड्डुल गर्न सकुन। हाम्रोमा एउटै कोखबाट जन्मिएको छोरीलाई जसरी संस्कार दिएका हुन्छौँ, छोरालाई पनि त्यसरी नै संस्कार दिनुपर्छ।
जसरी घरमा आमा, छोरी भनेर सम्मान गर्छौं, बाहिर पनि त्यसरी नै सम्मान गर्न आवश्यक छ। यस किसिमको सम्मान हुने गरेको भए सायद यस किसिमका घटना हुनेनै थिएनन्।
पहिलाको कानुनमा घाउचोट हेरेर सजायको व्यवस्था गरिएको थियो। तर मलाई अपराधीलाई पीडितको घाउचोट हेरेर होइन, अपराधीको सोच हेरेर सजाय दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चिठी पनि लेखेको थिएँ र धेरै ठाउँमा आवाज पनि उठाएँ।
मैले संघर्ष गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो पीडा बुझेर बोलाउनुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कानुनका बारेमा कुरा गर्ने अवसर मिल्यो। म त्यहाँ आफ्ना लागि मात्र गएको थिएन।
एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै गएकी थिएँ। यो मेरो मात्र पीडा होइन। एसिड आक्रमणमा परेका हरेकको पीडा हेरेर कानुन बनाउन आग्रह गरेकी थिएँ। हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्युले हाम्रो पीडा बुझेर एकदमै छिटो, १५ दिन भित्रमा कडा कानुन ल्याउनुभएको छ।
तर कानुन कडा भएर मात्र हुँदैन, जनचेतना पनि जगाउन आवश्यक छ। र मैले जनचेतना फैलाउन पहल गर्नेछु। समाज सेवा गर्नेछु। आगामी दिनमा मेरो अरू पनि सपना छ। त्यो पनि पूरा गर्नेछु।